Biyo-Bariga oo Jigjiga looga dabaaldegay; Qabri Dahar oo ciidamadu suurtagaliyeen & Harar oo weeraro lala beegsaday – Radio Daljir
Janaayo 20, 2020 4:29 g 0
Jidadka waaweyn ee magaalada Qabri Dahar ee gobolka QORRAXEY ayaa saaka lagu daadshay ciidamada faderaalka Itoobiya oo wata gawaadhida gaashaaman, kaddib markii Soomaalidu ay diideen in jidadka loo xidho dabaaldegga qowmiyadda Axmaarada oo u dabaaldegaysa ‘Biyo-Bariga’ diintooda Kiristaanka (Ethiopian Orthodox Church).
Biyo-bariga (Epiphany afka Ingiriiska ama Timket af Amxaariga) waa dabaaldegga Amxaarada maalinkii Nabi Ciise (Jesus Christ) lagu daahiriyey Wabiga Jordan, waana laba maalmood oo ka bilaabata maalinka Isniinta, ayada oo laga soo haajirayo Kaniisadaha, deedna bannaanka teendhooyin Eebbe bari laga mudanayo.
Jigjiga ayaa kamid ah meelaha aad looga dabaaldegay, loona xidhay dhammaan jidadka waaweyn.
Magaaalada Harar ayaan dabaaldeggu ka suurtagalin kaddib markii maleeshiyaan abaabulan oo ka socda qowmiyadda Oramadu ay weeraro kala duwan la beegsadeen goobaha ay leeyihiin ama ay isugu yimaadaan qowmiyadda Amxaaradu. Ma jirin ciidan boolis ah ama mid faderaal oo ka hawlgalay magaalada Harar, si loo suurtagaliyo in uu qabsoomo Biyo-barigu.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur: “Ayaandarro ka weyn ma jirtaa … in qaab qabiil deegaanadii dalka luqunta la isugu suro?”